Baaqa iscasillaadda madaxweynaha - BBC News Somali
Baaqa iscasillaadda madaxweynaha
Yusuf Xasan BBC Somali
Image caption Culays cusub oo soo wajahay Xasan Sheekh
Xildhibaanno 100 kor u dhaafaya, ayaa soo jeediyay baaq ah in madaxweyne Xasan Sheekh u soo jeediyay inuu is casilo. Hadaba maxay yihiin xildhibaanadaas? Dhibaato intee la eg ayay arrintaas ku soo kordhin kartaa xaaladda Soomaaliya ee cakiran?
Baaqa, oo 14 qodob ka kooban ayay xildhibaanadu faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha uu madaxweynuhu ku fashilmay. Waxay si gaar ah farta ugu fiiqeen, arrimaha ammaanka, oo ay tilmaameen in uu aad uga hooseeyo sidii uu ahaa intii aanu xukunka la wareegin Madaxweyne Xasan Sheekh.
Arrimaha dib u heshiisiinta, dib u dhiska hay'adaha dowladda, sida dhismaha Garsoorka, guddiyadii qaran ee dastuurku dhigayey, maamul goboleedyada iyo hay'adihii maamulka lacagta, ayay sheegeen in uu aad ugu guul darreystay madaxweynuhu.
Inkasta, oo madaxwenuhu uusan ilaa hadda war rasmi ah arintaan ka soo saarin, haddana waxaa xaqiiq ah in ay tahay dhibaato siyaasadeed, oo hor leh, oo culus, oo ku soo korartay madaxweynaha oo la daalaa-dhacayey dhibaatooyin baaxad weyn, oo aad ugu adag in uu wax ka qabto.
Waxaana, codsiga iscasilaada madaxweynuhu ku soo beegmay xilli ay beesha caalamku si aada indhaha ugu hayso xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan sidii nabad loogu soo dabbaali lahaa, dibna loogu dhisi lahaa hay'adihii dawladda isla markaasina ay ku sugnaayeen magaalda Muqdishu wafdi beesha caalamka ka socday oo shir la lahaa ra'iisulwasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh, iyadoo isla markaasina madaxeynuhu uu booqashu rasmi ah ku joogo dalka imaaraadka Carabta, oo howlo dib u dhis ah ka wadda Soomaaliya.
Waxaa warar lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in mdaxweyne Xasan Sheekh uu aad uga xumaaday hadalka ka soo yeeray qaar ka mid ah xildhibaanadii doortay in kayar laba sano ka hor, iyagoo hadalkoodana ku soo beegay xilii uu dalka dibadda uga maqan yahay.
Marka lamilicsado magacyada xildhibaanada baaqaan soo jeediyey, waxaa durba laga dheehanayaa in ay isugu jiraan; xildhibaanno, jagooyin ka waayey xukuumadda cusub ee Cabdiweli Sheekh, kuwo markii horaba ka soo horjeedey Xasan Sheekh, sida xildhibaanada ururka Islaax ugu jira barlamaanka iyo kuwii taageerayey Sheekh Shariif oo muddaba aad uga careysnaa sida Xasan sheikh iyo saaxiibadiisa xisbiga kula jira ay wax u maamulayaan.
Waxaa iyaguna meesha ka muuqda xildhibaano ka soo jeeda gobollada Bay iyo Bakool, oo aad uga careysan sida Madaxweynuhu u maamulay maamul u sameynta gobaladaasi oo dadkoodu u kala qaybsameen lix gobol iyo seddex gobol maamulo ku salaysan.
Image caption Xildhibaano ka caraysan xil ka qaadistii Saacid ayaa la sheegayaa inay qayb ka yihiin ololaha ka dhanka ah madaxweynaha
Xildhibaano ka careysan xil ka qaadistii Ra'iisalwasaarihii hore Cabdi Shirdoon Saacid, ayaa iyaguna ka dhex muuqda kuwa hormuudka ka ah baaqan.Rag damac madaxtinimo leh, ayaa iyaguna si buuxda uga qaybqaadanaya ololaha ka dhanka Madaxweyne Xasan Sheekh.
Si kastaba ha ahaatee, in kasta oo laga yaabo in dadweyne badan ay la qabaan xubnahan barlamaanka dareenkooda wakiilna ay shacabka ka yihiin, haddana, waxaa dadka u kuur gala siyaasdda Soomaaliya ku dhaliilayaan xildhibaanada in goobtii ay ahayd in hadladaan ay ka soo jeediyaan ay garab mareen oo sidii xisbiyo mucaarad ah ama siyaasiyiin aan gole lahayn oo kale ay u dhaqmeen, waayo waxaa la isweydiinayaa sababta ay baarlamaanka dareenkooda u geyn waayeen iyagoo kor u dhaafaya 100 xildhibaan.
Marka meel la iska dhigo eedeymaha Xasan Sheekh ay xubnahani u soo jeediyeen saxnimadooda iyo qaladkoodaba, haddana waxaa cad oo aan qarsoodi ahayn in Madaxweyne Xasan Sheekh, sida dad badan ay sheegayaan in ay ku hingoobeen rajadii ay ka qabeen, hasayeeshee dadka madaxweynaha ku dhaw dhaw ayaa iyaguna sheegaya in madaxweynuhu uu aad u dadaalayo laakiin ay jiraan dhibaatooyin ka tan badan oo u baahan in s iwada jir ah loo xaliyo.
Waxaa kaloo xusid mudan, waxaa la arki jirey baarlamaan xukuumadda dhaliil u soo jeediya, oo la xisaabtamo laakiin waa maxay sababta xildhibaanadu aaney u xusin xukuumadda, oo iyadu mas'uul ka ah howlaha lagu eedeeyey madaxweynaha in uu ku guul dareystay wax ka qabadkooda?